Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ပလက်ဝတွင် ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံမူ တားမြစ်ခံရ
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့တွင် ရခိုင် ဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံမူကို မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
“ ဒီလ ၁၅ ရက်နေ့ လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည် နယ်ဟာ သီးခြားစီဖြစ်တယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်တဲ့ဟာ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး၊ ချင်းပြည်နယ်မှာလဲ ငွေ ကောက်စရာမလိုဘူး ဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်” ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က ပလက်ဝမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော အရေးပေါ်အစည်းအဝေး တွင် ပလက်ဝ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဟန်ဝင်းအောင်မှ ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းလုံးမှ အကူအညီများ ပေးပို့ လှူဒါန်းနေချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကပ်ရပ် တည်ရှိသော ပလက်ဝမြို့တွင် ယခုကဲ့သို့ တားမြစ်မူ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“ ပလက်ဝမှာက ရခိုင်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတွေ အများအပြားရှိနေတော့ ဟိုမှာ အခက်အခဲ ကျရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး အကူအညီပေးချင်တဲ့ အတွက် အလှူငွေ စုဆောင်း ကောက်ခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်အပါအ၀င် မြို၊ ခမီး၊ ချင်းအမျိုးသားတွေကလည်း နိုင်သလောက် ထည့်ဝင်ကြပါတယ်။ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တားမြစ်တဲ့ အတွက် အခုတော့ လျို့ဝှက်ဘဲ ကောက်ခံနေရပါတယ်” ဟု သူက ပြောကြားသည်။
ပလက်ဝမြို့မှ ပြည်သူများ အပါအ၀င် အန်ဂျီအိုများကလည်း စေတနာပေါက် ထည့်ဝင်ကြသဖြင့် ယခုအခါ အလှူငွေ ကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်းကျော် ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရခိုင်ကျေးရွာ စုစုပေါင်း ၄၈ ရွာတည်ရှိပြီး ထိုအထဲမှ ရခိုင်လူမျိုး သီးသန့် နေထိုင်သော ကျေးရွာ ၂၈ ရွာနှင့် ရခိုင်နှင့် ခမီးလူမျိုးများ စုပေါင်းနေထိုင်သော ကျေးရွာ ၂၀ ရှိသည်။ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရခိုင်လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၎င်းအထဲတွင် မဲထည့်နိုင်သူ ၁၈ နှစ်အထက် ရခိုင်လူဦးရေ ၁၈၀၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ တားမြစ်မူနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ မသိရှိရသော်လည်း ပလက်ဝမြို့နယ်အား ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ဆက်နွယ် ပတ်သက်မူ ရှိမည်ကို မလိုလား၍ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သူက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 05:12
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ပလက်ဝတွင် ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံမူ တားမြစ်ခံရ . All Rights Reserved